အခကြေးငွေယူပြီး ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက် ကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် မေလ ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ မှာ နော်အုန်းလှနဲ့အဖွဲ့ ဆန္ဒပြနေကြစဉ်
photo : RFA / Myo Zaw Ko
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူဟောင်း နော်အုန်းလှ အပါအဝင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၀ ဦးလောက်ဟာ ရန်ကုန်မြို့ တာမွေအဝိုင်းကနေ ဆူးလေဘုရားအထိ ဒီနေ့ညနေပိုင်းက ဆန္ဒပြလမ်းလျှောက်ကြပါတယ်။
အခုလို ဆန္ဒပြလမ်းလျှောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်အုန်းလှက သတင်းထောက်တွေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“အန်တီတို့က လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကို အန်တီတို့က ဝိုင်းကူညီတယ်၊ ဒါကို သမ္မတက အမေရိကန် သွားတဲ့အခါကျတော့ နေ့စားခယူပြီးတော့ လုပ်တာဆိုပြီးပြောတယ်၊ အဲဒါကို အန်တီတို့က ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်”
ဆန္ဒပြသူတွေဟာ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အပြီးသပ်ရပ်စဲရေး၊ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသမှာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုပ်သိမ်းပေးရေး စတာတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နော်အုန်းလှအပါအဝင် ၁၀ ဦး ကျော် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြလမ်းလျှောက်သူတွေကို မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက တားဆီးသတိပေးခဲ့ပေမယ့် ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မယူပဲ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နော်အုန်းလှကို RFA သတင်းထောက် မရတနာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
နေ့စားခယူပြီးဆန္ဒပြနေတာဟာ တိုင်းပြည်ဆူပူမှုပဲ မဟုတ်လား။ သမ္မတက မခိုင်လုံပဲ ပြောမှာ မဟုတ်။ အကြောင်းခိုင်လုံရင် ဘာကြောင့် အရေးမယူသလဲ။ မဖမ်းသလဲ။ ဒါ မရိုးသားဘူး ဆိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။ “တဘက်လှည့်နဲ့ လုပ်ခိုင်း”နေတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်လှုံ့ဆော်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ သမ္မတကပဲ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကိုလည်း ဘာကြောင့် အရေးမယူ ၊ မဖေါ်ထုတ်တာလဲ။
နော်အုန်းလှက ဆန္ဒပြခွင့်လိုင်စင်ရထားတော့ ဘယ်အစိုးရတက်တက် ပြနေဦးမှာပဲ။ တခြားသူတွေကို ဖမ်းပြီး သူ့ကို ဘာလို့ မဖမ်းသလဲ။ လယ်ပြင်ပေါ် ဆင်သွားသလို ထင်ရှားပါတယ် နော်။ ဒီလိုစွပ်စွဲလို့ရအောင် ဒီလို လုပ်ခိုင်းထားတာပါ။ ဒါမှ ပြည်သူတွေဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တာတွေ အထမမြောက်ပဲ သေးသိမ်သွားပါမယ်။ (နော်အုန်းလှ အင်္ဂါ ထောင့် ဆုတောင်းနေတာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ။ ဘုရား မ လို့ အဖမ်းမခံရတာပါလို့ ပြောမယ့်သူများ ရှိကြပါသလား။ )
Pyay Chan Thar
President U Thein Sein must not talk likeaperson on the road side. Those who are followers of the dictators will never like any kind of demonstrations against them. But all the ordinary people like Naw Ohn Hla and her partners are doing for the interest of the ordinary people.
နော်အုံးလှဆိုတာ မျက်မှန်နက်ကြီးတပ်ပြီလျှောက်လုပ်နေတာပါ.. အမေစုတို့မှတ်ပုံတင်တုန်းက စပြီး
တောက်လျှောက်ကန့်ကွက်နေတာပါ... ဘယ်အစိုး၇ပဲ တက်တက်နော်အုံးလှတို့ကတော့ လမ်းပေါ်မှာပဲ၇ှိနေအုံးမှာပါ။
May 24, 2013 04:44 AM
I also believe they get paid to do it...otherwise how they can afford to live in Yangon? cost of living so high, furthermore only same faces see on most of the demonstration around Yangon. So dedicated for the peoples 24 hoursaday,7daysaweek, 365 days helping to peoples and nations. Are you sure, Naw Own Hla , that you didn't take money.